Ogaden News Agency (ONA) – Mareykanka oo Cunaqabateyn ugu Hanjabay Hindiya Hadii ay hub ka iibsato Ruushka.
Mareykanka oo Cunaqabateyn ugu Hanjabay Hindiya Hadii ay hub ka iibsato Ruushka.
Posted by Wariye Qaran	/ August 31, 2018
Mareykanka ayaa waxaa uu sheegay in uusan u damaanad qaadi karin xukuumada Hindiya hadii ay ka badbaadi karto cunaqabatayn kaga imaata Mareykanka hadii ay hubka difaac ka iibsato xukuumada Ruushka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Amniga.
Randall Schriver, oo ka tirsan saraakiisha sare ee waaxda difaaca ee the Pentagon’s u qaabilsan arimaha aasiya ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu dhawro saaxiib nimada Hindiya balse ay xakameyn doonaan hadii ay dhacdo arintaan. Waxaa uu sheegay in ay tahay walaac aad u weyn nidaamka iyo suuqa cusub ee wax iibsiga hubka ay raacday xukuumada Hindiya sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters.
Hindiya ayaa warar soo baxay maalmihii la soo dhaafay ay sheegayeen in ay u dhawdahay in Ruushka ay ka iibsato gantaalaha difaaca ee loo yaqaan S-400. Mareykanka ayaa horay cunaqabateyn u saaray wadanka Ruushka kadib khilaafkii dhexmaray Ukrine oo ay isku haystaan dhulka Crimea, waxaana uu wacad ku maray in uu cunaqabateyn saarayo dal walba oo la gala dhanka difaac iyo sirdoonka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sharciga cusub ee difaaca Mareykanka waxaa uu siinayaa in uu cunaqabateyn ku soo rogi karo dal walba oo raaca heshiis ka dhan ah danaha difaac ee Mareykanka.